Tigray: Mawjad Cusub Oo Xadgudubyo Ah Oo Ka Jirta Itoobiya, Sida Ay Sheegeen Kooxaha Xuquuqda – Rasaasa News
Goob joogayaal ayaa sheegaya in ciidamada Axmaarada ee la safan ciidamada Itoobiya ay uruurinayaan oo ay dileen dad shacab ah oo u dhashay Tigrayga, sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka. QM ayaa lagu wadaa in ay ka baaraan dagto in dalka laga baadho dambiyada dagaal.
War qoraal ah oo ay si wadajir ah u soo saareen Amnesty International iyo Human Rights Watch (HRW) ayaa xadgudubyadaas ku eedeeyay kooxo hubaysan oo ka soo jeeda Axmaarada, kuwaas oo la safan ciidamada Itoobiya.
“Iyadoo aanay jirin tallaabo caalami ah oo degdeg ah oo looga hortagayo xadgudubyo kale, Tigrayga, gaar ahaan kuwa xabsiga ku jira, waxay ku sugan yihiin khatar aad u wayn,” ayay tidhi Joanne Mariner, oo ah agaasimaha jawaabta qalalaasaha ee Amnesty International.
𝐒𝐡𝐚𝐜𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐫𝐞𝐞𝐠𝐚 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐮 𝐭𝐢𝐥𝐦𝐚𝐚𝐦𝐚𝐲 𝐱𝐚𝐬𝐮𝐮𝐪
Galbeedka Tigrayga ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu xumaa ee 13-ka bilood socday ee u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya, kuwaas oo ay caawinayaan ciidamada gobollada Axmaarada iyo Canfarta iyo ciidamada Tigreega (TPLF).
“Shacabka Tigreega ah ee isku dayaya inay ka baxsadaan mowjadaha cusub ee rabshadaha waa la weeraray oo la dilay. Tiro badan oo ka mid ah dadka xabsiga ku jira ayaa wajahaya xaalado naf-gooyo ah oo ay ka mid yihiin jidh-dil, gaajo, iyo daryeel caafimaad oo loo diiday,” HRW iyo Amnesty International ayaa sidaas yidhi.
Waxay la hadleen 31 qof oo ku nool galbeedka Tigray kuwaas oo ka warbixiyay xadgudubyada sii kordhaya.
“Markii dadku ay isku dayeen inay baxsadaan [Fano] waxay ku weerareen baangado iyo faashash,” ayuu 34-jir beeralay ah u sheegay iyaga oo ula jeeday koox maleeshiyo ah oo Amxaaro ah. “Waxaan meesha ku marnay maydad, dhammaanteena waanu naxnay kadib markii aan is dajinay, waxaan ogaanay in ay jiraan maydad kale oo badan, meel kasta oo aad u jeedsato, waxaa jiri doona shan, 10 mayd ah.”
𝐃𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐲𝐢𝐝 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐛𝐚𝐚𝐛𝐮𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐠𝐮 𝐤𝐚𝐱𝐚𝐲𝐬𝐭𝐚𝐲
Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah oo sheekadooda qayb ka mid ah lagu xaqiijiyay sawirka dayax-gacmeedka, ciidamada amaanka Axmaarada oo ay ku jiraan kuwa booliska gobolka iyo xubno ka tirsan maleeshiyaadka dhalinyarada Fano ayaa dadka soo ururiyay waxayna dadka u kaxaysteen goobo macdan ah.
Mid ka mid ah maxbuus hore oo ka baxsaday goobahaas, ayaa u sheegay hay’adaha xuquuqul insaanka inuu og yahay 30 qof oo ku dhintay intii uu halkaas ku xidhnaa, oo ay ku jiraan toddobo ka mid ah 200 oo nin oo qolkiisa ku jiray.
“Dhammaanteen waan soo marnay [garaaciid], laakiin kuwa ugu nugul waxay ahaayeen [ragga waayeelka ah],” ayuu yidhi. “Waxay xamili waayeen jidh-dilka, waa sababta ay u dhimanayaan.”
Afhayeen u hadlay dawlada ayaa beeniyay in ciidamada amaanka Axmaarada ay mas’uul ka ahaayeen weerarka. Wuxuu u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in tacadiyadaas ay gaysteen ciidamada Tigrayga.
𝐆𝐚𝐛𝐨𝐨𝐝 𝐟𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐥𝐛𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐠𝐚𝐲𝐬𝐭𝐚𝐲
Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay dagaalyahanada dhinac walba ah inay gaysteen tacadiyo ay ka mid yihiin tacaddi galmo, dil sharci darro ah iyo dambiyo salka ku haya isir.
Todobaadki hore ayay HRW ku eedaysay dagaalyahanada TPLF in ay tobanaan qof oo rayid ah ku dileen laba magaalo oo Axmaarada ah oo ay muddo kooban maamulayeen intii u dhaxaysay Ogosto iyo September.
Axmaarada iyo Tigreega ayaa ah labada qoomiyadood ee ugu awooda badan Itoobiya. Labaduba waxay sheeganayaan galbeedka Tigray halkaas oo dagaalku ka qarxay Noofambar 2020.
Axmaarada ayaa la safatay ra’iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka soo horjeeda kooxda TPLF.
𝐐𝐚𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐢𝐝𝐨𝐨𝐛𝐚𝐲 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐦𝐛𝐢𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥 𝐞𝐞 𝐤𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲 𝐈𝐭𝐨𝐨𝐛𝐢𝐲𝐚
Warbixinta Khamiista ayaa ku soo beegantay maalin ka hor kulanka gaarka ah ee Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay oo looga hadlayo dambiyada dagaal ee suurtagalka ah ee la galay intii uu socday dagaalka.
QM ayaa ku qiyaastay 20,000 oo qof dhawaan laga barakiciyay galbeedka Tigray, in ka badan 1 milyan ayaa ka barakacay deegaanka tan iyo markii uu dagaalku billowday.
” Curyaaminta caalamiga ah ee colaadda hubaysan ee Itoobiya waxay ku dhiirratay xad-gudbiyaasha xuquuqul insaanka inay ku dhaqmaan ciqaab la’aan waxayna bulshada ka dhigtay khatar inay dareemaan in la dayacay,” ayay tidhi Laetitia Bader, madaxa Geeska Afrika ee HRW.
“Marka loo eego xad-gudubyada xad-dhaafka ah, hoggaamiyeyaasha adduunku waa inay taageeraan abuurista hannaan baadhiseed caalami ah, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waa inuu Itoobiya ka dhigaa ajandaha rasmiga ah,” ayay raacisay.